बालुवाटारमा सत्तारूढ नेकपाकाे सचिवालय बैठक सुरू
नरेन्द्र माेदी पुनः नेपाल अाउँदै, याे वर्षकाे लागि 'ह्याट्रिक' भ्रमण
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पाँचौ पटक पुनः नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी भ्रमणको लागि प्रधानमन्त्री मोदी मंसिरको दोस्रो साता नेपाल आउन लागेको भारतीय दुतावास स्रोतले जनाएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा मोदीको यो पाचौँ भ्रमण हुने छ भने यस बर्ष हुन लागेको तेस्रो पटकको आगमन हुनेछ ।
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई लगाइको मुद्दामाथि सर्वोच्चमा मंगलबार बहस हुने भएको छ । प्रकाण्डको मुद्दाउपर आइतबार हुने भनिएको बहस समय अभाव भएको बताउँदै सर्वोच्चले मंगलबार बहस हुने जानकारी दिएको हो ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई जिल्ला तहको एकीकरण गर्ने जिम्मा दिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विशेष परिपत्र जारी गर्दै प्रदेश कमिटीले पूर्णता नपाउँदासम्मका लागि उनीहरुलाई नियमित बैठक राखेर जिल्ला तहको एकीकरण गर्ने जिम्मा दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई मिनेन्द्रको जवाफः मिति तोक्ने सरकारले हो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिन नसकिने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री समेत रहेका रिजालले निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकार तर, मिति घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोग हुनै नसक्ने दाबी गरे ।
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाले “मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पेश गरेका थिए ।
सरकारले ‘टेस्टेड’ व्यक्तिहरुबाट कस्तो समृद्धि खोजेको हो ?
काठमाडौँ । सरकारले समृद्धिको भद्दा भाषण गरेको पनि लामै भयो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रका कार्यक्रम होस्, सरकारी बैठक नै किन नहोस् जताततै समृद्धिकै चर्चा हुने गरेको छ । दुई तिहाई प्राप्त वर्तमान सरकारको मुख्य नाराको रुपमा रहेको छ ‘आर्थिक समृद्धि’ । सरकारका प्रधानमन्त्रीले यही भाषण गर्छन् । मन्त्रीहरु पनि प्रधानमन्त्रीको सिको गरेर यस्तै भाषणलाई दोहो¥याई तेहे¥याई उद्धृत गर्छन् ।
जाेशीलार्इ महाअभियाेग लगाइए काँग्रेसलार्इ सैह्य नहुने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधिश दीपकराज जोशीलाई महाअभियोग लगाइए आफुहरूलाई सैह्य नहुने चेतावनी दिएको छ । आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले न्यायाधिश जोशीलाई महाअभियोग लगाउने गल्ती नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।
बन्दकाे कारण उपत्यकाका विद्यालय पूर्णरूपमा बन्द
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले आइतबार गराएको एक दिने उपत्यका बन्दको प्रभाव बिहानैबाट परेको छ । बन्दको कारण उत्पत्यकाका सरकारी तथा निजी विद्यालयहरु पूर्णरुपमा बन्द छन् । नेकपाका कार्यकर्ताहरुले बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै केही सवारी साधनमाथि तोडफोड समेत गरेको बताइएको छ ।